The Ab Presents Nepal » न्युज २४ टेलिभिजनका पत्रकार चितवन प्रहरीको नियन्त्रणमा !
न्युज २४ टेलिभिजनका पत्रकार चितवन प्रहरीको नियन्त्रणमा !
भरतपुर-: चितवनका एसपी दानबहादुर मल्ल फेरी विवादमा तानिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको कार्यालय हाताभित्र रक्सीका दर्जनौ बोतलहरू भेटिएपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् । न्युज २४ टेलिभिजनका पत्रकार केदार शर्मा र भण्डाफोर अभियानका सूर्य बराललाई रक्सीका बोतलहरूको फोटो खिचिरहेको अवस्थामा चितवन प्रहरीले आधा घण्टा नियन्त्रण लिएको बताइएको छ ।